Akwụkwọ nke Dan Purvis na Martech Zone |
Edemede site na Dan Purvis
Onye Brand Republic họpụtara dị ka otu n'ime ndị isi UK 50 Marketing na Social Media influencers, Dan Purvis nwere mmasị na iweta ọdịnaya, ịre ahịa na ire ahịa ọnụ iji jikọta azụmahịa na ndị na-ege ha ntị, iji nyefee uru azụmaahịa na ROI.
“Ahịa mbụ” Ga-abụ Mantra
Monday, October 2, 2017 Fraịde, Ọktọba 6, 2017 Dan Purvis
Ijikwa ike nke ọtụtụ ọgbara ọhụrụ na teknụzụ ahịa dịnụ bụ ezigbo ụzọ maka azụmaahịa, mana ọ bụrụ naanị na iburu onye ahịa gị n'uche. Ọganihu azụmaahịa na-adabere na teknụzụ, nke a bụ eziokwu a na-enweghị mgbagha, mana ihe dị mkpa karịa ngwa ọ bụla ma ọ bụ ngwanrọ ọ bụla bụ ndị ị na-eresị ha. Mara onye ahịa gị mgbe ha na-abụghị onye ihu na ihu na-eweta nsogbu ugbu a, mana oke data dị na ya iji egwu egwu
Ihe kpatara Martech ji bụrụ atụmatụ dị mkpa maka uto azụmaahịa
Teknụzụ azụmaahịa na-arị elu n'ime afọ iri gara aga, ma hapụ afọ. Ọ bụrụ na ịnabatabeghị Martech ma rụọ ọrụ na azụmaahịa (ma ọ bụ ire ọrịre, maka nke ahụ), ị ga-aka ga-abanye n'ime ụgbọ mmiri tupu ịhapụ gị n'azụ! Teknụzụ azụmaahịa ọhụụ enyela ụlọ ọrụ ohere iji wuo mgbasa ozi ahịa dị egwu na nke atụ, nyochaa ahịa ahịa na ezigbo oge, ma mezie ahịa ha iji mee ka ntụgharị, arụpụta ihe na ROI dị elu, ebe ọ na-ebelata ụgwọ, oge na enweghị ike.